Wafdi UNka oo gaaray Mogadishu - BBC News Somali
Wafdi UNka oo gaaray Mogadishu
2 Sebtembar 2010
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay ayaa socdaal ku tegay magaalada Muqdisho oo xoogaa xasilloonayd ka dib markii labo toddobaad ku dhowaad ay halkaas ka dhacayeen dagaallo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof, boqollaal kalana ku dhaawacmeen.
Wafdiga Qaramada Midowbay ayaa waxaa hogaaminayay kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramadda Midowbay ee arrimaha siyaasadda, Leyn Basko. Waxaa kale oo wafdiga ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee Qaramadda Midowbey ee Somaaliya, Agostiino Mahiga.
Ujeedada socodaalka wafdiga ayaa waxaa BBCda uga waramay madaxa warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha, Cabdirashiid Xaashi waxuuna yiri, ' waxay wafdigu kala shireen madaxweynaha Somaaliya, Shiikh Shariif Shiikh Axmed arrimo badan oo ay ka mid tahay sida dowladda Soomaalida gacan loo siin lahaa iyo in dowladda Somaaliyeed laga wareysto dhinacyada ay taakuladda uga bahaan tahay.'
Saraakiisha Qaramadda Midowbay ayaa kulanka ka dib dib ugu noqoday magaaladda Nairobi, waxayna booqashadoodu ku soo beegan tahay maalin xoogaa ay xasiloon ka jirtay caasumadda ka dib markii ay dagaalo xoog baddani ka dhaceen oo ay ku dhinteen dad badani.